Izivakashi emhlabeni wonke ngokuvakashela France uyasijabulela babathanda ngokukhethekile Paris. Onkulunkulu, amatshe ezikhumbuzo mlando kuleli dolobha, akugcini nje elingene shí umlando, kodwa futhi ubuhle amafomu yezakhiwo. Lesi sikhungo eqinisweni ethuneni lapho izinsalela ubuntu zomlando odumile kakhulu kuleli zwe. Onkulunkulu lakhiwa phakathi French Revolution. Ngesinye isikhathi, i-Mausoleum lwesakhiwo lwase lombhishobhi St Genevieve.
Okwamanje, le isikhumbuzo ingenye ethandwa kakhulu izivakashi izindawo e-Paris. Abavakashi bakhangwa umlando wangcwatshwa izakhamuzi yizicukuthwane hhayi kuphela, kodwa futhi Umklamo omuhle isakhiwo. Ngokubukeka kungase kuqashelwe izitayela eziningana eclectic ayikwazi nangokunembile isibaluli ukwakhiwa indlela ethile yezakhiwo. Ngesikhathi lapho e onkulunkulu isebenze lombhishobhi, izincwadi zomlando ukubika ayenqaba abukhali izakhamuzi ukubukeka kwangaphandle lesi sakhiwo. Nokho, abantu baseParis ezidume ngenxa yesimo sengqondo sabo edidayo ukuze ezintsha amafomu yezakhiwo. Engingakusho nje kokukhumbula umlando we-Eiffel Tower.
Esabekayo ubukeka onkulunkulu (Paris). Photo isetshenziselwa eziningi amaphosta nama-postcard. Itholakala esifundeni yesihlanu, eduze nedolobha. Ngesikhathi singena esangweni izivakashi eziyinkimbinkimbi sihlangana oqoshiwe othi "Kusukela ezweni esibonga -. Abantu ehloniphekile" Khona-ke kukhona njalo izivakashi eziningi ezivela emhlabeni wonke. Ikakhulukazi ezithakazelisayo livele ukubukeka onkulunkulu lapho kuqala ukuhwalala, ngaleso sikhathi likhona ukukhanya ekhethekile.
Zonke abanesifiso sokwazi: "ngayiphi unyaka yasungulwa onkulunkulu Paris?" Indaba ezimpandeni zakhe siqu ekhulwini XVIII, lapho inkosi French uLouis XV, phambi eziwumnqamula-juqu yahlatshwa ukugula futhi wayeneminyaka engaba ngu ukunikeza waphuma umphefumlo, kodwa ngemva imithandazo St kungazelelwe Genevieve waqala ukuzizwa ngokwami uncono kakhulu futhi maduze iyakusinda. Inkosi wathembisa ukuthi uma ebuyela Genevieve kwezempilo, sithembisa ukwakha isonto elikhulu egameni usanta. Nokho, lapho inkosi yathola impilo, wakhohlwa nya ngalokhu ezulwini isithembiso futhi lapho ngicabangisisa ngakho kuphela emva kwesikhathi eside.
Ngesikhathi eneminyaka engu-12 ngemva ukwelashwa kwaqalwa ukwakhiwa uyinkosi isonto beqondiswa owaziwa ngesikhathi umakhi Soufflot. Ngakho, enye ngephuzu elithakazelisayo ezitholakala Paris. Onkulunkulu - isakhiwo enhle elijabulisa zonke izivakashi.
Project olwasungulwa wezakhiwo odumile wahola nkosi nezakhamuzi ngadideka. Ngenxa yaleso sikhathi besihambisana nesiminyaminya isiqondiso yezakhiwo Baroque, ecebile imihlobiso kanye namafomu zikanokusho. Ukuhlela ukwakheka Soufflot ukusebenzisa indlela yayo - original izinkomba eclectic ezine ezahlukene: Greek, Roman, Gothic, Baroque.
ISonto LamaKatolika uthathe isinyathelo ngokunamandla ngokumelene yephrojekthi ehlongozwayo ngenxa yokuthi ngendlela ithempeli Kuthi esiphambanweni WaseByzantium. Soufflot kwadingeka benze izinguquko ukuze ukubukeka kwesakhiwo. wathola Ngakho uhlobo lwakhe onkulunkulu Paris. Incazelo: insiza kusikisela ukuthi lokhu akulona nje ithempeli nethuna wabantu omkhulu yeFrance.
Ngemva kwalokho, njengoba umakhi isakhiwo njalo sibhekene nobunzima eminingi abayizakhamizi nokuntuleka koxhaso lwezimali. nobunzima lwezezimali yenkosi kwaholela yokuthi sasiba ukwehlisa izindleko zalo msebenzi, ukuyeka ezinye izakhi yezakhiwo. Ngenxa yalokho, ukwakhiwa esalibele, futhi saze saphela ungazange wahlala futhi iNkosi, futhi umakhi abadumile. Qeda ukwakha isakhiwo kwadingeka wabasizi bakhe.
Umlando alandelayo onkulunkulu
Lesi sakhiwo akahlalanga isikhathi sesonto eside. Kusukela ekuqaleni French Revolution eziningi amathempeli yezwe wahlupheka bagcinelwe sad: bona kwase atheleka kanye ivaliwe. St Genevieve ngokuyisimangaliso Temple waphunyuka kube senkingeni efanayo. Ukuze wenze lokhu, isakhiwo yesonto lalenziwa onkulunkulu - ethuneni heroes wezwe. Kuwo wonke umlando okwalandela kokwakhiwa izikhathi eziningana basukile izinguquko emagcekeni ezigodlo futhi emuva, futhi yashintsha igama layo. Ekugcineni, wanamathela ngemuva igama onkulunkulu.
Okwamanje, izivakashi eziningi bakhangwa Paris. Onkulunkulu uyisikhumbuzo, ethuneni, elibamba izinsalela amaFulentshi abadumile nabangane ahlonishwe yezwe. Ngakho, ngokwesibonelo, lapho ungakwazi ukushweleza umdwebi odumile wase-Italy Raphael. Ubuntu abaningi abadumile namanje elinde in amaphiko ukuba bazingcwabe kabusha endaweni enjalo abavelele njengabaholi:
Uma zivakashela iParis, onkulunkulu ofanelwe ukuba nendawo ephambili lapho uya khona.
Uhambo Engaqondakali ngokusebenzisa Khakassia